Machadka IBNU BAAZ Ee Hargeysa Oo Shahaadooyin Gudoonsiiyey 419 Arday Iyo Masuuliyiin Sare Oo Xukuumadda Ka Tirsan Oo Ka Qayb Galay Hadalana Ka Jeediyay – Tusmoonline.com
Machadka IBNU BAAZ Ee Hargeysa Oo Shahaadooyin Gudoonsiiyey 419 Arday Iyo Masuuliyiin Sare Oo Xukuumadda Ka Tirsan Oo Ka Qayb Galay Hadalana Ka Jeediyay
Wararka	December 24, 2016	130	Like
Hargeysa (TUS) – Machadka Ibnu Baaz oo ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaal caasimadda Hargeysa, ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey 419 arday oo ka qallin-jabiyey culuunta kala duwan ee machadku bixiyo shalay.
Xaflad ballaadhan oo loo sameeyey ardayda ka qallin-jabiyey Machadka Ibnu Baaz, waxa ka qayb galay wasiirrada Ganacsiga, Dhaqanka iyo Dalxiiska, Guddoomiyaha Komishanka Imtixaanaadka Qaranka, Agaasimaha Guud ee Warfaafinta, masuuliyiin ka socday Wasaaradda Waxbarashada, culimo, maamulka, macallimiinta, waalidiinta ardayda iyo marti-sharaf kale oo tiro badan.
Maamulaha maxhadka Ibnu Baaz Mr. Faysal Yuusuf Cilmi oo ugu horreyn halkaas ka hadlay, ayaa sharraxaad ka bixiyey marxaladihii kala duwanaa ee machadkoodu soo maray iyo sababaha loo aasaasay, “Machadka Ibnu Baaz waxa la aassaasay sannadkii 2008, waxana maanta qallin jabinaya 419 arday oo isugu jira 413 wiil iyo 206 gabdhood. Hadafka iyo ujeeddooyinka ugu waaweyn ee machadka loo aasaasay waxa ka mid in dalka laga soo saaro dhallinyaro ka dhisay diinta iyo akhlaaqada, lexjeclana ka qaba dalkooda iyo horumarkiisa,” ayuu yidhi Maamule Faysal.
Waxa uu intaa ku daray, in machadku dhowaan bilaabi doono qayb cusub oo ah barashada farsamada gacanta. Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Dr. Cumar Shucayb oo munaasibaddaas hadal kooban ka jeediyey, ayaa hambalyeeyey ardayda tirada badan ee ka baxay Machadka Ibnu Baaz oo uu sheegay inuu bixiyo waxbarasho tayo leh.
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Md. Khadar Xaaji Yuusuf oo hore uga mid ahaa bahda doorka weyn ka soo qaatay horumarinta tacliinta Somaliland, ayaa ka warramay farqiga u dhexeeya ardayga caqiidadiisa la dhiso ee diinta islaamka la baro iyo ka aan la barin, waxaannu ardayda qallin-jabiyey ku adkeeyey in cilmigoodu noqdo mid ficil ahaan aan uga muuqda, isla markaana wax ka beddela dhaqan-xumooyinka dhallinyarada ku kaca fal-dambiyeedyada kala duwan ee dalka ka dhaca. Sheekh Cabdillaahi Xasan Xaashi (Berberaawi) oo ka mid ah culimada waaweyn ee reer Somaliland, ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ardayda dhammaysatay culuunta Machadka Ibnu Baaz bixiyo, isagoo ku dheeray qiimaha barashada diinta islaamka leedahay iyo sida ay door muhiim ah uga qaadato guulaha ardaygu gaadho marka uu waxbarsahadiisa ku darsado diinta islaamka. Sidoo kale, waxa uu sheegay in Machadka Ibnu Baaz kaga duwan yahay goobaha kale ee waxbarashada ee dalka in qof kasta, da’doodu ha noqdee fursad u heli karto inuu wax ka barto, waxaannu waalidiinta ku dhiirrigeliyey inay ubadkooda marka hore ku bilaabaan barsahada culuunta diiniga ah.
Waxa kaloo halkaas ka hadlay Guddoomiyaha Komishanka Imtixaanaadka Qaranka Md. Daa’uud Axmed Faarax, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Mr. Cabdi Abokor iyo Agaasimaha Waaxda Waxbarashada Gaarka ah ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Mr. Muuse Maxamed Shide(Xayaakalaah), kuwaas oo dhammaantood bogaadiyey ardayda ka qalli-jabiyey Machadka Ibnu Baaz oo ay ku ammaaneen doorka uu ka qaato tarbiyadda iyo toosinka caqiiqada diinta iyo dhaqanka dadka wax ka bartay. Gebagebadii xafladda waxa shahaado-sharafyo gaar ah la guddoonsiiyey ardayda kaalmaha sare galay, halka ardayduna hadiyado kala duwan ku maamuuseen maamulka iyo macallimiinta Machadka Ibnu Baaz ee wax soo baray.